Ny dikan'ny anarana dia Danil. Mystery of the name Danil
Inona ny anarana Danil
Ny lehilahy iray antsoina hoe Danil dia manana toetra tsara toy ny poise, saina fisainana ary ny fahaiza-mahita ireo zavatra madinika. Ity olona ity dia tonga mandrakariva amin'ny famonjena amin'ny fotoan-tsarotra, mora ny mifandray aminy.
Avy amin'ny teny hebreo, ny dikan'ny Danil - "Andriamanitra dia mpitsara", "Andriamanitra no mitsara ahy", "Andriamanitra no mpitsara ahy."
Ny niandohan'ny anarana Danil:
Ny anarana Danil dia miverina lalina amin'ny tantara - izany dia tamin'ny fotoana nipoitra ny Kristianisma ary avy amin'ny teny hebreo. Izy io dia avy amin'ny anaran'ny mpaminany hebreo an'i Daniela.
Ny toetra sy ny fandikana ny anaran'i Danil:
Amin'ny maha-zaza an'i Danilka dia ankizy tony sy malemy fanahy, indraindray tena saro-kenatra, saingy mandalo taona izy. Tiany ny fanatanjahan-tena, milomano. Na izany aza dia tsy miezaka foana izy handresy sy hahazo loka. Izy io dia mitondra aina ara-pahasalamana, ny toeram-pialam-boly mahafinaritra dia ny natiora, izay manome azy hery sy hery. Ny fiainany, manan-danja lehibe amin'ny fifandraisana eo amin'ny fianakaviana sy ny fifandraisana, mandany andro fialantsasatra eo amin'ny faritry ny havany maro. Tena tia mandray vahiny sy mifankatia. Tonga hitsidika azy matetika ny namana.
Sarotra ny miady hevitra amin'i Danila. Miontana ny fahatahorana maro be. Afaka manaporofo ny foto-keviny mandritra ny ora maro izy fa tsy maneho fihetseham-po. Ny olona manana izany anarana izany dia ho tonga amin'ny fanafahana foana, na dia tsy maintsy mandika ny fitsipika sy ny fitsipika rehetra aza izy ireo, na dia hanenjika azy ireo aza ny feon'ny fieritreretana. Na izany aza, raha mifandray akaiky izy dia mahita tanjona hafahafa ho an'ny tenany ho an'ny namany, dia tsy hanana fahatokiana mandrakizay io olona io.
Araka ny natiora Danila - olona izay "any aloha" any amin'ny toerana rehetra. Tapa-kevitra foana izy ireo, saingy alohan'ny handraisany an'io fanapahan-kevitra manan-danja io, ny tsirairay dia hieritreritra sy handanjalanja tsara. Ny sehatry ny asa aman-draharahan'i Danil dia mety ho goavana tokoa - ny mpanakanto, ny koeky, ny mpanorina, ny mpandraharaha, ny manam-pahaizana elektronika, ny mpamolavola fiaramanidina, ny mpikaroka, ary ny miasa mandrakariva no ho azy amin'ny toerana voalohany. Tena miasa am-pihetseham-po izy. Ireo toetra toy ny fifanoherana sy ny fikolokoloana dia mety hitarika an'i Danil hahomby amin'ny lafiny rehetra. Tsy ho lasa mpitarika ratsy izy.
Ny fiainana manokana dia miankina amin'ny fihetseham-po izay tsy fantany ny fomba fanehoana araka ny tokony ho izy, tsy tia fihetseham-po loatra izy. Na izany aza, ny fanambadiana voalohany, matetika, dia tsy mahomby foana. Danil dia ray be fitiavana mahafinaritra. Miaraka amin'ny ankizy mandany fotoana maro, toerana tiany - toerana fialantsasatra, ny natiora, ny fanjonoana. Tsy tia ny fifandirana eo amin'ny fianakaviana izy, ary misy fifandirana tsy miresaka herisetra sy resaka amin'ny feo avo. Mamaha ny olana rehetra amin'ny fanaovana tsinontsinona izy ary manandrana manamboatra ny kofehy amin'ny herin'ny fandresen-dahatra.
Tsy ny ray rehetra no mitaiza ny zanany tahaka an'i Danil. Izy dia mitaiza ny ankizy, tia milalao ary miara-mandeha amin'izy ireo, mitsidika an-tsitrapo fivorian'ny ray aman-dreny. Fa ny vehivavy kosa tsy ao an-trano, na amin'ny raharahan'ny raharahany. Tiany ny manokana fotoana ivelan'ny trano, ny natiora na ny firenena. Matetika dia tia manjono na mihaza.
Zavatra mahaliana momba ny anaran'i Danil:
Ny anarana Danil, izay nolazaina tamin'ny vanim-potoana fahiny, toa an'i Danilo, dia hita matetika teo amin'ireo tantsaha mpanao asa tanana tany Rosia.
Ny endri-piainan'ny iray amin'ireo tantara romotra indrindra tao Bazhov - "The Flower of Flowers", izay tafiditra ao anatin'ny fanangonana malaza taloha - "Malachite Box", dia nantsoina hoe Danil.
Ny anaran'i Danil amin'ny fiteny samihafa:
Ny anaran'i Danil amin'ny teny sinoa: 达尼伊尔 (Danemark)
Anarana amin'ny teny japoney: ダ ニ イ ル (Daniir)
Ny anaran'i Danil amin'ny teny Espaniola: Daniel (Daniel)
Ny anarana Danil amin'ny teny alemana: Daniel (Daniel)
Ny anarana Danil amin'ny teny poloney: Daniel (Daniel)
Danil amin'ny teny Okrainiana: Danilo
Endriky ny matoanteny amin'ny teny esperanto Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto
Danil - lokon'ny anarana : manga-manga, mavo
Voninkazo an'i Danil : buttercup
Inona no dikan'ny anarana hoe Karina?
Masoivohon'i Malta any Rosia
Faminaniana an'ilay zazalahy Vyacheslav: miandry ny hanoanana sy ny fiverenan'ny dinosaure ny olombelona
Dane DeHaan no lasa ray
Afaka bevohoka ve ny holatra?
Miririritra ny mofomamy
Tadiavo amin'ny saka
Ny jaky varavarankely
Vatom-baravarankely ho an'ny efitra fandroana
Tendrombohitra "vato kakazo"
Instagram dia manana kaonty, mitarika ny saribakoly Barbie!
Ahoana ny fomba hametahana ireo ridao romanina?